जाडोमा देखिने छाला र कपालको समस्या कसरी सामधान गर्ने ? यस्ता छन् डा. बन्दना झाका सुझाव
कृषि सामग्रीमा गहुँको बीउ अभाव
डा. बन्दना झा
(छाला तथा कपाल विशेषज्ञ)
जाडोको समयमा बढी मात्रामा कपाल तथा छाला सुख्खा हुने वा छाला फुट्ने समस्या देखिने गर्छ । जाडोको समयमा हावामा पानीको मात्रा कम हुने हुँदा वातावरण सुख्खा हुन्छ । छाला र कपालमा भएको मोइश्चर वातावरणले सोछ्ने गर्छ ।
जसकारण छाला सुख्खा हुँदै जान्छ, त्यसको फलस्वरुप हातखुट्टा फुट्ने, ओठ फुट्ने, छाला सुख्खा हुने, एलर्जी हुने, कपाल सुख्खा भएर फुरुङ्ग देखिने, कपालमा चाया परेर संक्रमणसमेत हुन सक्छ ।
जाडोको समयमा नुहाउनका लागि थोरै समय छुट्याउँछन् । शरीरको सफाइमा ध्यान नदिएमा जाडोको समयमा छालामा धेरै समस्या देखिन सक्छ । जाडोमा सबैभन्दा धेरै देखिने समस्या भनेको लुतो हो ।
सरसफाइमा ध्यान नदिए लुतो एकजनाबाट परिवारका अन्य सदस्यामा समेत फैलिन सक्छ । पसिनाका कारण मात्र हुने फंगल इन्फेक्सन तथा दाद गर्मीको मौसममा मात्र नभएर जाडोमा समेत देखापर्न सक्छ । यो पनि सरसफाइमा ध्यान नदिएका कारणले नै गर्दा हुने गर्छ । नवजात शिशुमा धेरै तेल लगाउने गर्दा तेलको तह बढ्दै जाँदा तेल जमेर संक्रमणसमेत हुन सक्छ ।
जाडोको समयमा धेरैजसोलाई विन्टर एक्जेमा, एटोपिक एक्जेमा, एटोपिक डर्माटाइटिस, सिरोर्यासिस, हातखुट्टा सुन्निएर रातो हुने, चिसोका कारण डाबर आउने, चिसोका कारण रगतको सर्कुलेसन राम्ररी हुन नसक्दा हात र नङ रातो तथा नीलो हुने तथा एकदम दुख्ने समस्या हुन सक्छ ।
चिसोका कारण छालामा पिम्पल जस्तो दाना आउने समस्या हुन सक्छ । जाडोको समयमा चिसो भगाउनका लागि आगो तथा हिटर ताप्ने, घाममा धेरै बस्दा पनि छाला सुख्खा हुने समस्या हुन सक्छ । यसरी छाला सुख्खा हुँदा फुस्रो भएर छाला रातो हुने, छाला निस्कने, फुट्ने, पोल्ने, चिलाउने हुन सक्छ ।
हिटरको प्रयोग गर्दा निस्कने युभी किरणले छालामा चाया–पोतो निम्त्याउने वा पहिलाबाट भए समस्या थप बढाउन सक्ने हुन्छ । जाडोमा लगाइने उनीको लुगाले छालामा एलर्जी हुने समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
जाडोमा सुरक्षित कसरी रहने ?
सुख्खा तथा फुटेको छालाको स्याहार समयमै नगरेमा विभिन्न जोखिम बढाउन सक्छ । जाडोमा नुहाउनका लागि अधिकांशले तातो पानीको प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
तातो पानीले छालामा भएको माथिल्लो सुरक्षात्मक तहलाई हटाउने गर्छ । यसले छालालाई थप सुख्खा बनाउने गर्छ । नुहाउनका लागि मनतातो पानीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । र, नुहाउने समयलाई जति कम गर्न सकियो त्यति राम्रो हुने गर्छ ।
अनुहारमा तातो पानीको प्रयोग बिर्सेर पनि गर्नु हुँदैन । नुहाएपछि कटनको रुमालले हल्का पुछेर तुरुन्तै मोस्चराइज क्रिमको प्रयोग गरिहाल्नु पर्छ । शरीरलाई तथा अनुहार पुछ्दा रगडेर कहिले पनि पुछ्ने गर्नु हुँदैन ।
शरीर अलिअलि भिजेको बेलामा मोस्चराइज क्रिमको प्रयोग गर्दा जाडोमा शरीरको मोस्चराइज हराउन पाउँदैन, क्रिम पनि कम युज हुन्छ र शरीरले बढी सुरक्षा पाउने हुन्छ । मोस्चराइज क्रिममा जोजोभा अइल, सियर बटर, पेट्रोलियम, ग्लिसिरिन, ल्याकटिक एसिड लगायतका तत्व भएको लोसन प्रयोग गर्नु पर्छ ।
जाडोमा फेसवासको प्रयोग गर्दा पनि माइल्ड खालको फेसवासको प्रयोग गर्नु पर्छ । अत्यधिक सुख्खा छाला भएकाले तथा छाला सुख्खा भएका दिनको एकचोटि मात्र फेसवासको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । फेसवासदेखि लिएर छालामा प्रयोग गरिने हरेक सामग्री आफ्नो छालाको प्रकार हेरेर मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
जाडोको समयमा अनुहारमा भिटामिन सी सेरुम र सन्स क्रिमको प्रयोग राम्रो हुन्छ । छाला एकदम सुख्खा भए दिनको ३ देखि ४ पटकसम्म मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जाडोमा धेरै साबुन वा कडाखालको साबुनको प्रयोग गर्नाले छाला सुख्खा हुँदै जान्छ, त्यसैले जाडोमा साबुनको सकेसम्म कम प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ वा बास्नारहित ग्लिसिरिन भएको साबुनको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जाडोको समयमा हातखुट्टा तथा छाला फुट्ने, हातखुट्टाको छाला मोटो भएर आउने समस्या भएकाले दैनिक प्रयोग गरिने मोस्चराइजरमा युरिया, ल्याक्टिक एसिड भएमा यसले छालालाई थप नरम बनाउन मद्दत गर्छ ।
ओठ फुट्ने वा सुख्खा हुने समस्या कम गर्नलाई बाहिर हिँड्दा ‘एसपीएफ’ भएको ओठमा लगाउने क्रिम (लिप बाल्म)लाई हरेक घण्टा लगाइरहनु पर्छ । हातको छालालाई कडाखालको साबुन र डिटरजेन्टबाट बचाउनका लागि पन्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाहिर सुख्खा हावा चलेको समयमा ननिस्कने, वा निस्कन परे अनुहारलाई सकेसम्म छोपेर मात्र निस्कने गर्नुपर्छ ।
जाडोयाममा हिटर ताप्ने, घाममा धेरै बस्दा शरीरमा पानीको मात्रा पनि कम हुने हुँदा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु पर्छ । आगो तथा हिटर ताप्ने, घाममा धेरै बस्दा पनि छाला सुख्खा हुन नदिन दुरी कायम गर्नुपर्छ ।
आगो तथा हिटर तापेर छालालाई एक्सपोज गर्नुभन्दा पनि हट वाटर ब्यागको प्रयोग गर्न उचित हुन्छ । साथै, आजकल व्याल्यांकेटमै हुने इलेक्ट्रिक हिटरको प्रयोग बढ्दो देखिन्छ । तर, यो सुरक्षित हुँदैन । यसले आगो लाग्ने तथा सर्ट सर्किट हुने डर रहन्छ ।
उनीको लुगाभित्र जहिले पनि सुतीको लुगा लगाउनाले एलर्जीबाट बच्न तथा चिलाउने समस्या नहुन सक्छ । भित्री लुगा तथा थर्मल कोटहरू पनि सुतीकै प्रयोग गर्नु पर्छ । जाडोमा चिसोबाट बच्नका लागि लुज खालको पन्जा र मोजाको प्रयोग गर्नु पर्छ । टाइट मोजा वा पन्जाले रगतको सञ्चारमा अवरोध पु¥याएर अन्य समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
जाडोमा एउटै मोटो लुगाको प्रयोग गर्नुभन्दा पनि पातलो लेयर गरेर लगाएको उचित हुन्छ । बच्चाहरूलाई तोरीको तेलको साटो मिनिरल ओइलले मालिस गरिदुनु उचित हुन्छ । तोरीको तेल बाक्लो हुने हुँदा यसले रौँ छिद्रलाई बन्द गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र छालामा समस्या पैदा गर्न सक्छ । छालाको साथसाथै कपालमा पनि तातो पानीको प्रयोग गर्नु हुँदैन । जाडोको समयमा छाला तथा कपालको समस्याबाट बच्नका लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
ताजा फलफूलका साथै अनार, बेरीलगायतका एन्टिअक्सिड्यान्टले भरिएको फलफूलको सेवन गर्नुपर्छ । यसबाहेक छालामा केही समस्या आए वा पहिलाको भन्दा छाला तथा कपालमा केही परिवर्तन देखिए आफैं उपचार गर्नुभन्दा पनि तुरुन्तै छाला तथा कपालको डाक्टरलाई सम्पर्क गरेर सल्लाह लिनुपर्छ ।
(विराटनगरस्थित क्युटिज केयर क्लिनिककी छाला तथा कपाल विशेषज्ञ डा. झासँग कोशी अनलाइनका लागि अंकिता ताम्राकारले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)